Kutaurirana kwekuona kuri Kuchinja muKushanda | Martech Zone
Vhiki rino, ini ndaive mumisangano miviri nemakambani akasiyana vhiki ino uko kutaurirana kwemukati kwaive iko kwekukurukurirana.
Yekutanga yaive Sigstr, an email siginicha yekushambadzira chishandiso kugadzirisa masiginecha emaimeri kukambani. Chinhu chakakosha mukati memasangano ndechekuti vashandi vanoisa pfungwa pamabasa avo uye havawanzo kutora nguva yekutaurisa iyo brand kunze kune vanotarisira nevatengi. Nekugadzirisa masiginecha emaimeri pasangano, Sigstr inova nechokwadi chekuti mishandirapamwe mitsva kana zvipiriso zvinoratidzwa nemaziso kune wese munhu anogamuchira email.
Yechipiri yaive Dittoe PR, yedu yeruzhinji hukama hwakasimba, uyo akataura pamusoro pekukosha kwe usimbe mukati mesangano. Nevazhinji vehukama hwePR vachitsvaga, ivo vanowanzo kuwana mikana kune avo vatengi. Slack yakave inobatsira muzvikwata zvinowedzera mhedzisiro nevatengi vadzo.
Sezvo makambani ari kuchinjisa zvimwe zviwanikwa pane kuvimbika kwevatengi nekuchengetwa, vangangodawo kuve vanochinja kutarisisa kuenderana kwekushambadzira uye kuuraya musangano rese. Pachishoma, kuenzanisa nekutengesa kwakakosha ... uye zvese zvine chekuita nekutaurirana.
Mune yanhasi chaiyo-nguva nzanga vashandi vakajaira kutaurirana nekukurumidza uye vanosarudza kugamuchira mhinduro mune iyo nguva, kwete ongororo yekota yega yega mumugwagwa. Dzidza kuti simba rekutaurirana rine simba sei uye kuti mabhizimusi epasirese ari kutyaira sei kugadzirwa nekubatana nekuchigamuchira zvizere.
Mabhodhi emabhodhi akakosha zvinhu zvemukati, chaiko-nguva kutaurirana uye matekinoroji akawanda uye akawanda arikurova musika unobatanidza akawanda mafidha e data mune yakanyanya-kuona chikuva. Zviratidzo zvakakosha:
65% yevanhu vanhu vanoona
40% yevanhu vanopindura zvirinani kana zviono zvikawedzerwa pane kunyora wega
90% yeruzivo inopfuudzwa kuuropi inoonekwa
Zvemukati zvine zvinoonekwa mhedzisiro mu94% yakawanda kubatanidzwa
Makumi masere muzana ezviuru zvemamirioni vangatoda kugamuchira mhinduro mune chaiyo-nguva
Hoopla chishandiso chekuita nhepfenyuro yekusimudzira kukwidziridzwa uye kutaurirana nehupenyu data, vatungamiriri, gamification uye kuzivikanwa. Vakagadzira iyi infographic, Iyo Shanduko yeKutaurirana Pabasa.
Tags: ubongodhibhodhigamificationvatungamiririndangarirokuonekwasigstrusimbekutaurirana kwekuonakunzwisisa kwekuonakudzidza kunoonekwazvinoonekwakutaurirana kubasa